मुलुक संकटको चक्रव्युहमा : गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे पुनर्विचार गरौँ Canada Nepal
मुलुक संकटको चक्रव्युहमा : गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे पुनर्विचार गरौँ
कमल थापा जेठ ४ २०७८
अहिले कथित ’धर्मनिरपेक्षता’को आडमा सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नष्ट पारेर बिदेशी धर्म संस्कृति लाद्ने काम योजनावद्ध र संगठितरूपमा भैरहेको छ । लोभलालच र प्रलोभनमा पारेर तथा भ्रम सिर्जना गरेर लाखौंको संख्यामा धर्मपरिवर्तन गराईएको छ । धर्मपरिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाती र दलित समुदायका रहेका छन् ।
संगठित र योजनावद्धरूपमा हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्वाबलम्वीहरुको धर्मपरिवर्तन गराईएको छ । धर्म संस्कृति माथी भैरहेको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने कालान्तरमा नेपालमा हिन्दु र बुद्धिष्टहरू नै अल्पमतमा पर्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक एकता र सद्भाव खलबलिएर देशमा धार्मिक द्वन्द बढ्ने छ । अन्तोत्वगत्वा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान नै समाप्त हुनेछ ।
माओवादी हिंसा र आतङ्क अहिले अन्त भएको छ । तर, बौद्धिक आतङ्कको प्रभाव भने कायम रहेको मात्र होईन, अझै बढ्दै गएको देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्यका निमित्त सनातन धर्म संस्कृतिमा बिश्वास राख्नेहरुका बिचमा एकता र स्पष्टताको आबश्यकता छ । सोचाईमा मात्र होईन, कार्यनीतिमा पनि एकरूपताको खाँचो छ । जनमतको कमि छैन । त्यो जनमतलाई संगठित गरी शक्तिमा रुपान्तरण गर्नु जरूरी छ ।
नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने तथा सनातन धर्म संस्कृति र सभ्यतालाई नेपाली समाज र राष्ट्रनिर्माणको आधार बनाउने रणनीतिक उद्देश्यमा धेरै हदसम्म एकमत छ । तर,त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यनीतिका वारेमा भने स्वयं हिन्दुराष्ट्र पक्षधरहरुका बिचमा ठूलो मतभेद छ । यो मतभेदको दूरी कम गर्नु नितान्त आबश्यक छ ।
फेरि पनि एकपटक भारतको उदाहरण हेरौँ । केही बर्ष अगाडी भारतीय जनता पार्टीले कश्मिरको ’पि डि एफ’ भन्ने पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनायो । यी दुई पार्टीहरुका बिचमा ठूलो बैचारिक भिन्नता छ । भारतीय जनता पार्टी कश्मीरलाई अन्य राज्यहरू भन्दा बिशेष दर्जा दिन भारतीय संविधानमा गरिएको धारा ३७० खारेजीको पक्षमा निरन्तर सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएको दल हो ।
अर्कोतर्फ ’पि डि एफ’ उक्त धारालाई कश्मीर अस्तित्वको मेरूदण्ड मान्ने पार्टी हो । उनीहरूको सहकार्य रणनीतिक थियो । सहकार्यबाट कश्मिरमा भाजपाले आफ्नो प्रभाव र संगठन विस्तार ग–यो । पछि संसदमा बहुमत पुग्ने वित्तिकै उक्त धारा ३७० खारेज गरी दियो । यो केवल उदाहरण मात्र हो । यही उदाहरण नै कायम गर्नु पर्छ भन्ने छैन । रणनीति र कार्यनीति समय काल र परिस्थिति अनुसार निर्धारण गर्ने विषय हो भन्न मात्र खोजिएको हो ।
हामी कहाँ लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यनीति वारे बुझाउन गाह्रो छ । हालै राप्रपाले आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा नेकपा(एमाले) को उमेदवारलाई सघाउने निर्णय ग–यो । नेकपा(एमाले) का तर्फबाट सहयोगका निम्ति लिखितरूपमा अनुरोध आयो । राप्रपाबाट सहयोग गर्ने निर्णय भयो । अरु उम्मेदवार व्यक्तिगतरूपमा योग्य नै हुनुहुन्छ । तर, उहाँअरु पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमी कै हो । उहाँहरुको तर्फबाट कुनै पार्टीले पनि राप्रपासँग स्थागतरूपमा सहयोग मागेन ।
गत संसदीय चुनावमा राप्रपाले नेपाली कंग्रेस र नेकपा(एमाले) दुवैसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । झापामा राप्रपाको सहयोगबाट नेकपा(एमाले)का केपी ओली लगायत धेरैले चुनाव जिते । राप्रपाले पनि एमालेबाट सहयोग पायो र संसदमा एक मात्र भएपनि सांसद निर्वाचित गर्न सफल भयो । सहयोग लिन हुने तर सहयोग दिन नहुने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राप्रपा एक्लो दल हो । यस्तो अवस्थामा अन्य दलहरुसँग सहकार्य र चुनावी तालमेल नगर्ने नीति घातक हुन्छ । जब हामी बलियो हुन्छौ, त्यसपछि हामीले कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । हामी बलियो भएको अवस्थामा संसद मात्र होईन सडकको विकल्प पनि हामी रोज्न सक्छौ । त्यस अवस्थामा सदन र सडक दुवैको शक्ति प्रयोग गरेर हामी हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापित गर्न सक्छौ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व, राजसंस्था र उदार अर्थतन्त्रको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पुरा गर्न सक्छौ ।
(लेखक थापा राप्रपा अध्यक्ष तथा पूर्वउप्रधानमन्त्री पनि हुन् ।)
जेठ ४, २०७८ मंगलवार १४:४३:०३ बजे : प्रकाशित
कोरोना संक्रमणको बढ्दो संख्या सुनेर आत्तिने नगरौं, यस्ता उपाय अपनाऔं - डा. रवीन्द्र पाण्डे
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्र ढंगले फैलिदै गएको छ । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । यसैबीच डा. रवीन्द्र पाण्डेले बढ्दो कोरोनाभाइरसको संक्रमण संख्या सुनेर आत्तिन नहुने बताएका छन् ।
डा. पाण्डेको भनाई यस्तो छ
- दैनिक संक्रमितको संख्या सुन्दा संक्रमण नभएका व्यक्तिलाई पनि मनोबैज्ञानिक असर पर्दछ । मनमा कल्पना, उत्साह, योजना आदि हराउंदै जान्छ । तसर्थ संख्या देखेर आत्तिने नगरौं । अमेरिका, युरोपमा दिनमा लाखौं संक्रमित हुँदा पनि अस्पताल भर्ना हुने तथा मृत्यु हुने संख्या एकदम न्यून छ। सबै काम चलिरहेको छ ।
- ओमिक्रोन छिटो फैलिने तथा सिकिस्त त्यति नपार्ने प्रजाति हो । हामी कोरोना भाइरससंग डराएको हैन, आफ्नो आर्थिक तथा भौतिक क्षतिप्रति डराएको हो । ओमिक्रोनले गम्भीर बनाउने सम्भावना कम हुन्छ भने किन डराउनु ?
- नेपालमा दैनिक १० हजार संक्रमित हुँदा पनि अस्पताल प्याक भएका छैनन् । अस्पताल भर्ना हुने, आइसीयु चाहिने संक्रमित एकदम न्यून छन् । खोप नलगाएका + गम्भीर दीर्घरोग लागेका व्यक्तिमात्र ओमिक्रोनको जोखिममा छन् ।
- सरकार लगायत कसैको आशा नगरौं ! आशा गर्दा निराशा हात लाग्छ । हामीले पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई पिसिआर टेस्ट निशुल्क र वडावडामा गर, मास्क निशुल्क वितरण गर, दिनमा १० लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउ भन्दा सरकारले सुन्दैन ।
- आफ्नो काम नछोडौं । डबल मास्क लगाएर, स्यानिटाइजर बोकेर काम गरौँ । खोप लगाऔं । भीडभाडबाट बचौं ! लक्षण देखिए परिक्षण गरेर घरमै बसौं ! हामीले गर्ने यहि हो । - खोप नलगाएका बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई घरभित्र पनि आइसोलेसनमा राखौं ! उहाँहरुलाई बचाउनु हाम्रो दायित्व हो ।
- भेटघाट, बैठक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सकभर भर्चुवल वा खुला ठाउँमा एकदम थोरैको उपस्थितिमा गरौँ । वर्क फ्रम होम लाई अबलम्बन गरौँ ! यो महिना घुमफिर नगरौं
- यो छाल यो महिनापछि घट्दै जान्छ । लामो समय रहँदैन । - अर्को पटक सिग्मा वा अर्कै नामको प्रजाति आउँछ । तसर्थ नामसंग डराउनु पर्दैन । सबैले खोप लगाएपछि भाइरस कमजोर बन्दै रुघाखोकीजस्तो हुनेछ । त्यसपछि यसको असर फ्लुको जस्तै हुनेछ । हामीलाई थाहा छ, गतसालको डेल्टाभन्दा अहिलेको ओमिक्रोन निकै कमजोर छ । यसरी कमजोर हुँदै गएर निष्प्रभावी हुने हो ।
- महामारीको सिधान्त अनुसार गणना गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा सबैले खोप, मास्क लगाउने, उपचार गर्नुपर्नेलाई उपचार गर्ने अनि यो दैनिक गणना नगर्ने हो भने मनोबैज्ञानिक असर कम हुन्थ्यो । गणना गर्नु सबै राष्ट्रलाई बाध्यता छ ।
माघ ४, २०७८ मंगलवार २०:१४:४९ बजे : प्रकाशित